कतै तपाईलाई पनि डिप्रेशन त भएको को छैन ? ख्याल गरौ है यस्ता लक्षण देखिन्छन् | Rastra News
कतै तपाईलाई पनि डिप्रेशन त भएको को छैन ? ख्याल गरौ है यस्ता लक्षण देखिन्छन्
करिब ३० वर्षका एक मानिस कार्यालय जाने तयारी गर्दैथिए। उनले भान्छाकोठामा प्याज राख्ने ठाउँबाट खसेको ‘एक्लो’ प्याज देखे । त्यो प्याज उनले टिपे तर राख्ने ‘उचित’ ठाउँ भेटेनन् । जता राख्दा पनि अशोभनीय लागेपछि उनले त्यसलाई कोटको खल्तीमा राखे र कार्यालय गए। कार्यालयभर उनको दिमागमा त्यो प्याज कहाँ राख्ने होला भन्ने घुमिरह्यो। घर फर्किएपछि पनि उनले त्यस प्याजलाई राख्ने सुहाउँदिलो ठाउँ पाएनन्। जसका कारण त्यो प्याज उनको कोटको खल्तीमा एक वर्षसम्म बसिरह्यो। उनी ससुराली जाँदा होस् या कार्यालय उनको साथमा त्यो प्याज साथ लागिरह्यो । भेटिएका हरेक मानिसलाई प्याज कहाँ राखौँ भनेर प्रश्न गरिरहे।
अति भएपछि परिवारले उनलाई मनोविश्लेषक कहाँ पुर्‍याए । त्यहाँ पनि उनले सुरुमै सोधे, ‘यो प्याज कहाँ राखौँ ?’
जवाफमा मनोचिकित्सकले भने, ‘यो भनेको प्याज सामान्य कुरा हो । जहाँ राखे पनि हुन्छ।’
भन्न त भने तर सम्झाउन भने सकेनन् । झण्डै छ महिनापछि मात्र उनलाई ‘एब्स्ट्रक्याट बन्न पुगेको प्याज’लाई सामान्य लाग्न थाल्यो।
यो कुनै बनावटी कथा होइन, मनोविश्लेषक बासु आचर्यको अनुभव हो।
माथिको घटनाले प्रस्ट पार्छ, डिप्रेसन अर्थात् अवसादका लागि कुनै ठूलो घटना चाहिँदैन । मान्छेलाई विथोल्न प्याजजस्ता साना कुरा नै पर्याप्त हुन सक्छ।
खुसीका बेला हामी खुसी हुन सक्तैनौँ वा गम्भीर परिस्थितिमा गम्भीर बन्न सक्दैनौँ भने सर्तक हुन जरुरी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा करिब ३५ करोड मानिस डिप्रेसनका सिकार छन् । जसमा तीन चौथाई बढी नेपालजस्ता विकाशोन्मुख देशका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा मात्रै करिब पाँच करोड डिप्रेसनका बिरामी रहेको तथ्यांक छ।
संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष १० लाखको हाराहारीमा डिप्रेसनका बिरामीले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । नेपालमा पनि गएको वर्ष ४ हजार ६ सय ६७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो, जसको ८० प्रतिशत कारण डिप्रेसन देखियो।
हिजोआज प्रविधिको बढ्दो उपयोगले मानिस एक्लिन थालेका छन् । यसका कारण पनि धेरै मानिस डिप्रेसनमा पर्ने गरेका छन् । खोजकर्ताहरु एक्लोपनले शरीरमा के असर पार्दोरहेछ र मानिस डिप्रेसनमा पर्दोरहेछ भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । त्यसो त सन् २००६ मा स्तन क्यान्सर भएका २८ सय महिलामाझ गरिएको अध्ययनअनुसार तुलनात्मक रुपमा जो व्यक्ति परिवारका सदस्यसँग टाढा छन्, एक्लै बस्न रुचाउँछन् उनीहरुमा डिप्रेसन देखियो । डिप्रेसन हुने महिलामध्ये मृत्यु अँगाल्नेको संभावना पाँच गुणा बढी रहेको पनि अध्ययनमा देखाइएको छ।
रुन मन लाग्ने, निराश हुने, एक्लै बस्न रुचाउने, झर्को लाग्ने, दिक्क मान्ने, बोल्न मन नलाग्ने, छटपटी हुने, हातखुट्टा झमझम गर्ने, पैताला पोल्ने, तालु पोल्ने, मुख सुक्ने, आत्मग्लानि हुने, नकारात्मक सोचाइ, निद्रा कम पर्ने, खानामा रुचि नहुने, आफूलाई निकम्मा सम्झने, मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, बारम्बार रुने, शंका लाग्ने, कानमा आवाज आएको अनुभूति हुने लगाएतका लक्षण देखिने गर्छन् । कतिलाई भने जो मानिस देख्यो उही पागलजस्तो लाग्ने हुन्छ भने कतिलाई आफूलाई मानसिक समस्या छ जस्तो अनुभूति हुन्छ । मनोविश्लेषक आचार्यका अनुसार कतिपय मानिस आफैँ डिप्रेसनमा गएँ कि भन्दै उपचार गर्न आइपुगेका पनि छन्।
भर्खरै मात्रै गुगलले नौ प्रश्न सोधेर डिप्रेसन छ या छैन पत्ता लगाउने एप्लिकेसन तयार पारेको छ । यस एप्लिकेसन नेपालमा प्रयोगमा भने आइसकेको छैन । अमेरिकीहरुमाझ प्रयोगका लागि यो तयार पारिएको हो।
डिप्रेसनबाट बच्ने उपाय
डिप्रेसनको अवस्थामा मनमा एउटै कुरा घुमाइरहनु हुँदैन । बरु मन परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुनै नराम्रो अनुभव मनमा लिइरहँदा मस्तिष्कमा समेत असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले अनावश्यक कुरामा एकोहोरो गहिरो सोचाई नगर्ने । मन भुलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यस्तै निन्द्रालाई नियमित राख्ने, स्वस्थ खाना समयमै खाने, तनाव सबैलाई हुन्छ तर यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यसबारे सोच्ने, आफूले जति सकिन्छ त्यति नै महत्वाकांक्षा राख्ने, परिवारसँग बस्ने, आफ्नो काममा व्यस्त र मस्त रहने गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्।
डिप्रेसनले फाइदा !
कतिपय मानिसले भने डिप्रेसनको पनि भरपूर फाइदा उठाउने गरेका छन् । चर्चित रेस्लर डेभेन जोन्सन उर्फ द रक भन्छन्, ‘म डिप्रेसनका कारण रेस्लर बनेँ । २० वर्षको छँदा अमेरिकी फुटबल टिम क्यालगरी स्ट्याम्पेडर्सको तर्फबाट फुटबल खेल्थेँ । मलाई टिमबाट निकालियो र म डिप्रेसनको सिकार बन्न पुगेँ।’
फुटबल टिमबाट ननिकालिएको भए उनी डिप्रेसनमा पर्ने थिएनन्। त्यस्तो नभएको भए उनी रेस्लर पनि हुने थिएनन्। त्यसैले कतिपय अवस्थामा द रकलाई जस्तो डिप्रेसन फाइदाजनक पनि हुन सक्छ तर त्यसलाई सदुपयोग भने गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।
स्रोत ः शुक्रबार डटकम
तिम्रो हात त बचाएका थियौं तर तिमीलाई बचाउन सकिएन
राष्ट्र न्यूज सम्वाददाता असाेज ९, २०७७
राष्ट्र न्यूज सम्वाददाता जेठ २१, २०७५
संस्थाको परिचयः नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ ( NELTA ) २०७१ साल वैशाख २९ गते स्थापना भएको हो ।…
स्मार्ट पोखराको शिलान्यास कहिले मेयरसा’ब ?
राष्ट्र न्यूज सम्वाददाता जेठ १४, २०७५
सरस्वती गुरुङ सन् १९०३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले उतिबेलाको २५ लाख खर्चेर एसियाकै सबैभन्दा ठूलो दरबार बनाए । जसलाई…
हिमनदीमा देखिएको समस्या र समाधान
राष्ट्र न्यूज सम्वाददाता माघ २९, २०७४
– दिपेन्द्र सिंह लामीछाने विगत केही समयदेखि वातावरणमा आएको परिवर्तनसगै यसले जल हिँउ हिमनदी क्षेत्रमा पनि प्रभाब पार्न शुरु गरेको…
नामजस्तै काम ‘सहारा’
राष्ट्र न्यूज सम्वाददाता माघ १०, २०७४
–सरस्वती गुरुङ आफ्नो जन्मसँगै हरेक मानिस र स्थापनासँगै हरेक संघसंस्था एउटा लक्ष्य बोकेर अगाडि बढ्ने गर्दछन् । अगाडि बढ्दै जाँदा…